Xaaladaha Dadka La Hayb Sooco ee Soomaaliya
Ururka warbixinta soo saaray ayaa diiradda saaray Gobollada Dhexe ee Soomaaliya, Puntland iyo Somaliland.
Urur u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ee caalamka oo loo yaqaano Minority Rights Group International ayaa soo saaray warbixin uu kaga warramayo xaaladda dadka laga tirada badan yahay ee Soomaaliya.
Ururkan oo ay xaruntiisu tahay magaalada London ayaa sheegay in xaaladda ay ku sugan yihiin beelaha laga tirada badan yahay ee Soomaaliya ay tahay mid u baahan in dadka laga wacyigeliyo xadgudubyada ba'an ee loo geysto dadkaasi.
Ururku wuxuu sheegay in xadgudubyadaasu ay ka mid yihiin Faquuq amma hayb sooca iyo sabooltinimo. Waxaa uu ururku ku taliyay in ay u baahan tahay dadkaasi in xaaladohoodu wax laga laga bedelo si mustaqbalka ay u noqdaan dad ku nool cisi iyo sharaf qeybna laga siiyo fursadaha halkaasi ka jira.
Warbixinta ayaa si gaar ah diiradda u saartay dadka laga tirada badan yahay ee ku nool gobollada dhexe ee Soomaaliya, Puntland iyo Somaliland. Dhulkaasoo ay warbixintu sheegtay in ay ka jiraan xaalado kala duwan oo dhanka siyaasadda ah.